मधुपर्क, २०६६ कात्तिक देवकोटाः जीवन्त कविता ! -तेजेश्वरबाबु ग्वंग एकै देवकोटा अनेक भइदिन्छ । प्रत्येक कवितामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफैँ अस्तित्व बनेर फुकिदिन्छ । लाग्छ, देवकोटाका फत्र\_mयाईमा म नि मुस्काइरहेको हुन्छु । लाग्छ, उनका कवितामा ब्रहृम-विवेकका स्वानुभूति हाँसिदिन्छ मुसुक्क । मुसुक्क ओठहरूका फत्र\_mयाईमा देवकोटा ः जीवन्त कविता बनिदिन्छ । कहिले कण्ठाग्र पारिदिन्छु महाकवि देवकोटा-सिर्जनाका वाणीहरूलाई । कहिले स्वरभरि गीत गाइदिन्छुÙ 'कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो ? कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो ?'
नितान्त जिज्ञाशामूलक प्रश्नका पेटारो गुथ्दै थालिएका देवकोटाका 'यात्री' कविता अध्यात्म चिन्तनमुखी महका चाकाझैँ लाग्न थाल्छ । प्रत्येकचोटि पढ्छु एकै कविता अनेक भइदिन्छु मै पनि देवकोटाका चेला । बिहानी पाठमा पढ्छु । मिरमिरे बिहानी घाम झुल्किदिन्छ यात्रीका यात्रासित । प्रश्नका जिज्ञाशासित चिन्तनमुखी चेतना फुरिदिन्छ । मानौँ चेतनाको चुनारी फुकाइरहेझैँ फरर...फरर... । गर्न खोजिएको सतत् प्रयास मस्तिष्कको द्वार खोल्न लागिएकै हो । एउटा क्षितिज उघार्छ अध्यात्म चिन्तनमा रूपक अलङ्कार जडेर मानिसको दैहिक अङ्गप्रत्यङ्गलाई मन्दिरमा रूपान्तर गरेर यात्री कविता । जीवन यात्रा भरिदिन्छन् यात्री कविता वाचन भरिभरि ।
कविता, अध्ययनका आल्हावादहरू छताछुल्ल भइदिन्छन् यो मनभरि, मुटुुभरि, शरीरभरि, अङ्गप्रत्यङ्गभरि । म यात्री बनिदिन्छु, कविता पाठनभरि, वाचनभरि यात्री कविताभरि । यात्री कवितासितै जीवनयात्रा भरिदिन्छु, सललल पानीका प्रवाह बनी । हावाझैँ अदृश्य गति लिइदिन्छु आˆनै प्रवाहमान पाइलाभरि । हिँड्दाका पाइलाहरू अदृश्य दृश्य जस्तैÙ मानौँ पातहरूका झुलनमा मात्र हावाका अस्तित्�